‘मेरो X को छम्मा’लाई भेटेपछि पुण्य गौतमले यस्तो भने (भिडियो हेर्नुस्) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/‘मेरो X को छम्मा’लाई भेटेपछि पुण्य गौतमले यस्तो भने (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । सिर्जनाले गाएको ‘मेरो X को छम्मा’ बोलको गीत विवादित बनेको छ । सो गीतमा राखिएका कतिपय शब्द महिलालाई होचयाउने खालको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विवाद भएको हो ।
आफुलाई सामाजिक अभियन्ता भन्ने पुण्य गौतमले पनि सो गीतका बारेमा प्रतिकृया जनाएका थिए । उनले त्यो गीत गाउँदै यस्तो पनि गीत हुन्छ ? भनेर दिएको टिप्पणी टिकटकमा निकै भाइरल भएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
उनको टिप्पणी भाइरल भएपछि अहिले सिर्जनाले पुण्यलाई भेटेकी छन् । उनले पुण्य गौतम भर्जन नै बनेको भन्दै त्यसलाई आफुले नराम्रो रुपमा नलिएको बताएकी छन् । आफुलाई नकारात्मक प्रतिकृया दिनेहरुलाई पनि नराम्रो नमानेको बताइन् ।
आफ्नो गीत सुनिदिएको र अझ आफुवाट राम्रा कुरा आउन् भन्ने चाहनेले प्रतिकृया दिएका कारण अब आफुले सुधार गर्ने पनि बताएकी छन् । सिर्जनाका अगाडी पुण्यले भिडियो हेरेर आफुलाई नेपाली जस्तो नलागेको पनि बताएका छन् । भिडियो हेर्दा तपाई विदेशी जस्तो देखिनु भएको छ, पुण्यले भने, म अझै पनि भन्छु त्यसमा भएका कतिपय शब्दमा भने मेरा केही विसहमति छन् ।
उनले प्रेम भन्दा पनि अरु केही छ भन्ने खालका अन्य गीत पनि सिर्जना गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले प्रेम र त्यसमा धोका खाएका कुरा मात्र गीतमा आउने गरेका भन्दै फरक धारका गीत गाउन सुझाव दिएका छन् । उनले प्रेम सफल नहुँदैमा जिवन नसकिने र आत्मनिर्भर भएर बाँच्नका लागि नै त्यो गीतले प्रमोट गर्ने बताइन् ।
पटक पटक रुवायो यस भिडियोले किन यति धेरै मार्मिक बनेको होला ? (भिडियो सहित)
पूजामा गको ४ बर्ष पनि नपुगेकी बहिनीलाई १७ बर्षीय दाईले गरे यस्तो….घ’टनास्थलमा यस्तो अचम्म देखियो-भिडियो हेर्नुहोस